Wax ka ogow sababta Ivan Rakitic ku kaliftay inuu shalay ka soo lugeeyo garoonka diyaaradaha Magaalada Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 15 Okt 2019. Waxaa sawirro laga qaaday laacibka khadka dhexe ee Barcelona, Ivan Rakitic oo ka soo lugeynaya garoonka diyaaradaha Magaalada Barcelona ee El Prat Airport.
Rakitic ayaa ka soo lugeeyey garoonka diyaaradaha Magaalada Barcelona shalay oo Isniin ahayd kaddib markii ay mudaaharaadayaal xireen Waddooyinka Catalonia.
Dhammaan waddooyinka ka baxa ama soo galay garoonka diyaaradaha El Prat Airport ayaa ahaa meel ay bartilmaameedsadeen mudaaharaadhaashu kuwaasoo ka carreysnaa in maxkamadda sare ee Spain ay xabi ku xukuntay sagaal nin oo ka mid ah dadka u ololeeya in Catalonia ay ka go’do Spain inteeda kale.
Raggaan ayay maxkamaddu ku xukuntay xabsi u dhexeeya 9 illaa 13 sanadood, iyadoo lagu eedeeyey qeybtii ay ku lahaayeen isku daygii sanadkii 2017-kii ay Catalonia ku doonaysay inay uga go’do Spain.
Ivan Rakitic ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Barcelona kaddib markii uu soo matelay xulkiisa qaranka Croatia, waxaana sawirro laga qaaday laacibkan khadka dhexe oo lugeynaya wadada dhinaceeda markii uu ka soo baxay garoonka diyaaradaha Magaalada Barcelona.
31-sano jirkaan ayaa xulkiisa Croatia u ciyaaray labadii kulan ee ay dheeleen isreeb-reebka Koobka qarammada Yurub ee EURO 2020.
Rakitic ayaa ku soo bilowday kulankii ay 3-0 uga adkaadeen Khamiistii dhiggooda Hungary, halka uu bedel ku soo galay kulankii kale ee ay Axaddii xulka qaranka Wales la galeen barbaraha 1-1 ah.